Job 32 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Elaịhu tinyere ọnụ n’ihe a na-ekwu (1-22)
O wesara Job na ndị enyi Job iwe (2, 3)
O cheere ka ndị ọzọ kwuchaa tupu ya ekwuwe (6, 7)
Ọ bụghị naanị afọ ole mmadụ dị na-eme ka ọ mara ihe (9)
Ọ na-enu Elaịhu enu ikwu okwu (18-20)
32 Ụmụ nwoke atọ a kwụsịrị ịgbalị ka ha saa Job okwu maka na o kwetasiri ike na ya bụ onye ezi omume.*+ 2 Ma ezigbo iwe were Elaịhu nwa Barakel, onye si n’agbụrụ Bọz,+ n’ezinụlọ Ram. O wesara Job oké iwe maka na Job na-agbalị ka o gosi na ya bụ onye ezi omume kama igosi na ọ bụ Chineke bụ onye ezi omume.+ 3 O wesakwara ndị enyi Job atọ oké iwe maka na e nweghị ezigbo ihe ha sara Job, kama ha kwuru na Chineke bụ onye ọjọọ.+ 4 Elaịhu nọ na-eche ka ndị ọzọ kwuchaa tupu ya agwa Job ihe ọ chọrọ ịgwa ya, n’ihi na ha niile tọrọ ya.+ 5 Mgbe Elaịhu hụrụ na ụmụ nwoke atọ a enweghịzi ihe ha ga-ekwu, ezigbo iwe were ya. 6 Elaịhu nwa Barakel onye si n’agbụrụ Bọz wee malite ikwu okwu. Ọ sịrị: “Abụ m nwata,Ma unu bụ ndị okenye.+ Ọ bụ ya mere m ji kwanyere unu ùgwù ghara ikwu okwu,+Anwaghịkwa m ịgwa unu ihe m ma. 7 M kwuru n’obi m, sị, ‘Ka ndị okenye kwuo okwu. Ka ndị dịrịla ndụ ọtụtụ afọ kwuo okwu ka ndị ma ihe.’ 8 Ma, ọ bụ mmụọ nsọ nke Chineke na-enye ndị mmadụ,Bụ́ ume nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, na-eme ka ha ghọta ihe.+ 9 Ọ bụghị naanị afọ ole mmadụ dị na-eme ka ọ mara ihe,Ọ bụghịkwa naanị ndị mere agadi na-aghọta ihe dị mma.+ 10 Ọ bụ ya mere m ji asị, ‘Geenụ m ntị. M ga-agwakwa unu ihe m ma.’ 11 M nọ na-eche ka unu kwuchaa. M nọ na-ege ntị n’ihe unu na-akọwa+Mgbe unu nọ na-achọ ihe unu ga-ekwu.+ 12 M gere unu ntị nke ọma,Ma e nweghị onye n’ime unu mere ka Job mata na ihe ọ na-ekwu abụghị eziokwu*Ma ọ bụ saa ya ihe ndị o kwuru. 13 N’ihi ya, unu ekwula, sị, ‘Anyị ma ihe. Ọ bụ Chineke ga-agwa ya na ihe ọ na-ekwu abụghị eziokwu, ọ bụghị mmadụ.’ 14 Ọ bụghị m ka ọ gwara ihe ndị o kwuru. N’ihi ya, agaghị m asa ya ihe ndị unu sara ya. 15 Ụjọ ji ha. Ha enweghịzi ihe ha ga-asa ya. Okwu agwụla ha n’ọnụ. 16 M nọ na-echere, ma e nweghịzi ihe ha na-ekwu. Ha kwụ ebe ahụ. E nweghịzi ihe ha na-asa ya. 17 Ọ bụ ya mere mụnwa ga-eji saa ya okwu. M ga-ekwukwa ihe m ma, 18 N’ihi na okwu juru m ọnụ. Mmụọ Chineke nke dị n’ime m na-enu m enu ka m kwuo okwu. 19 Ime ahụ́ m dị ka mmanya na-enweghị ebe o si ekupụ,Ka karama akpụkpọ ọhụrụ chọrọ ịgbawa agbawa.+ 20 Ka m kwuo okwu ka ahụ́ dajụọ m. M ga-emeghe ọnụ m kwuo okwu. 21 Agaghị m ele onye ọ bụla anya n’ihu.+ Agaghịkwa m eto onye ọ bụla otuto elu ọnụ,* 22 N’ihi na amaghị m otú e si eto mmadụ otuto elu ọnụ. Ọ bụrụ na m na-eme otú ahụ, Onye kere m ga-ebibi m ngwa ngwa.
^ Ma ọ bụ “maka na ọ bụ onye ezi omume n’anya onwe ya.”
^ Ma ọ bụ “baara Job mba.”
^ Ma ọ bụ “etu onye ọ bụla aha.”